रहस्यमय सन्दर्भः फिल्ममा झैं उम्मेदवारद्वारा आफैँले आफैँलाई बम ! | नेपाल आज
रहस्यमय सन्दर्भः फिल्ममा झैं उम्मेदवारद्वारा आफैँले आफैँलाई बम !
बुधबार, २० मङि्सर २०७४ गते प्रकाशित
‘सर नमस्कार ! नेपाल आजबाट ।’
‘नमस्कार । के थियो होला ?’ कसिलो रवाफमा जवाफ आयो ।
‘काठमाडौँ, चितवनलगायतका शहरी क्षेत्रमै बम पड्किए । उम्मेदवार नै खतरामा देखिए । यही बारेमा बुझ्न ।’ संवाददाताले प्रश्न तेर्साए ।
त्यसलगत्तै प्रहरी उच्च अधिकृतको जवाफले विषय रहस्यमय बनाइदियो । ‘पत्रकार नायक फिल्मको जस्तो हुनुपर्छ । बम कस्ले पड्काएको भन्ने आफैँले पत्ता लगाउने ।’ प्रहरी अधिकृतको यो सुझाब केही उत्तर मिश्रित थियो । नायक फिल्ममा मुख्यमन्त्री आफैँले बम बिष्फोट गराएको र जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउन कुनै पहल नगरेको रोचक प्रसंग छ । जनतालाई आतंकित पार्ने र सहानुभुति आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति नेपालको राजनीतिमा नयाँ होइन । यसको दृष्टान्तका रुपमा २०५१ सालको मध्यावधीलाई लिन सकिन्छ ।
बर्तमान राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीका पति मदन भण्डारीको रहस्यमय दुर्घटनामा निधन भएसँगै रिक्त स्थानमा निर्वाचन हुँदै थियो । काँग्रेस सभापतिलाई जितेर साँसद भएका थिए भण्डारी । भण्डारीको मृत्युपछि सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई फेरि उम्मेदवार भए । उनलाई टक्कर दिइन् मदनपत्नी बिद्याले । भट्टराईका सामू बिद्याको राजनीति आँलोकाँचो थियो । एमालेले चुनावी रणनीति बनायो । बिधुवा बिद्याको सारीमा आफैँले रातो रंग छर्किएर काँग्रेसको नारा लगाइयो । यो तथ्यका बारेमा नेपाल आजले यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । बिधवालाई रातो रंग छर्केको प्रसंगले हिन्दु समाजमा तरंग पैदा गर्यो । बिद्याको माहोल एकाएक बन्यो । फलतः नखाएको बिषका कारण समेत भट्राई चुनावमा पराजित भए ।
राजनीतिक दौडमा हारबाट जोगिने अन्तिम अश्त्रका रुपमा आफैँलाई भौतिक प्रहार गर्ने र दोष विपक्षीलाई थोपर्ने रणनीतिलाई प्रयोग गरिन्छ । अहिले कतिपय बम प्रहारका प्रसंगलाई त्यसरी नै लिन थालिएको छ ।
प्रहरी अधिकृतले बम उम्मेदवार आफैंले पड्काएको भनि प्रतिप्रश्न गर्दा उनले संवादातालाई नायकको पत्रकारजस्तो बन्न सुझाए । पत्रकारको भूमिकामा रहेका अनिल कपुरले मुख्यमन्त्रीको बम विष्पोटमा हात रहेको प्रमाण मुख्यमन्त्रीसँगको लाइभ अन्तरवार्तामा प्रस्तुत गरेका थिए ।
ती प्रहरी अधीकृतले अनुसन्धान जारी रहेको र घटनाको जिम्मेवारी कसैले नलिएको अवश्थामा यसै भन्न नसकिने जनाए ।
बम विष्पोटको जिम्मेवारी कसैले लिएको छैन । आरोपित पक्ष विप्लव नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीका एक नेताले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘कतिपय स्थानमा उम्मेदवार नै हाम्रा कार्यकर्ता बनेजस्तो छ ।’